19th Febuary, 2012
ရှစ်ဆယ့်ရှစ်အရေးအခင်းအပြီး၊အတောက်အပြောင်ဆုံးသောတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းဆိုရင်ABSDF ဟာနံပတ်တစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်၊၁၉၉၀ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအမတ်မင်းများ၏စင်ပြိုင် အစိုးရပေါ်လာပြီး သည့်နောက် ပိုင်း၊ ABSDFဟာ၊ အနာဂတ်နိုင်ငံရေး ကိုမျှော်ကိုးသောနိုင်ငံရေးသမားများ၊ တကိုယ်တော် ကိုယ်ကျိုးစီးပွါး ကိုဦးစားပေးသောသူတို့၏ ချနင်း သွားသောလှေကားထစ်များဖြစ်ခဲ့ရ တယ်။
အုပ်စုလိုက်တိုက်ပွဲတွေကြားမှာ အမှန်တရားကိုချစ်မြတ်နိူးသူတွေနေရာ မရခဲ့သ လို၊ ချေမှုန်းခံခဲ့ရသည့် သာဓ ကတွေနဲ့အလံတော် ကိုလက်ဆင့်ကမ်းသယ်ဆောင်ခဲ့ရ တယ်၊ယနေ့ထက်ထိပင် အမှန်တရားကို လိုလားသူနဲ့ ဖုံးကွယ်လိုသူတွေ အားပြိုင်ဆဲပဲဆိုတာ ဘယ်သူ မှငြင်းနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး၊ ဒီအပြင်အဖွဲ့အစည်းကို ချစ်မြတ်နိုး တဲ့စိတ်နဲ့ယူကြုံးမရဖြစ်နေရသူတွေ လည်းရှိတယ်။
မယ်၊လူညီရင်ဤကိုကျွှဲဖတ်ခဲ့ကြသောသူတွေကြောင့်အုပ်စုလိုက်အားပြိုင်မှုတွေတွေ့ခဲ့ရသလို၊ နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်အားနည်းသောစစ်ဝါဒီသမားသက်သက်ကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်၊ အဲဒီလိုစစ်ဝါဒီအာဏာရှင်လက်သစ်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်လွန်းသောရှုးသွတ်မှုတွေကြောင့် အလွန်တရာအရုပ်ဆိုးအကျဉ်းတန်သောသမိုင်းကို ကျနော်ဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစုတွေ အားလုံးခါးစည်းခံခဲ့ရပေပြီ၊
ကာမှ နာမည်ပျက်ရကိန်းဆိုက်တော့တာမို့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းကာကြိတ်မနိုင်ခဲမရငိုချင်းချခဲ့ရသူ
တကယ်တော့ABSDFဟာ၊ပေးဆပ်မှုများစွာနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါ၊ အမိတိုင်း ပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အဘက်ဘက်ကပေးဆပ်ရင်းဆက်လက်ချီတက်ခဲ့ရတာပါ၊
ရော်နယ်လ်အောင်နိုင်ကဲ့သို့သော၊နိုင်ငံရေးအရေခြုံရာဇ၀တ်သားများပါလာတယ်၊ သူရဲ့နောက် ကြောင်းကိုသိရဲ့သားနဲ့ မကဒတဗဟိုရဲ့အရေးပါလှတဲ့သုသေသနဌါနာမှာ၊ ဌါနမှုးအထိတာဝန် ပေးခဲ့တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တာ၊ ဒါဟာနိုင်ငံရေးပုလင်းတူဗူးဆို့များကအကာအကွယ်ပေးလူရာသွင်း ထားတာကိုသက်သေပြတဲ့အချက်တွေပါပဲ၊
စက်နေတာကိုသိလိုက်ရတော့ အမှန်ကိုလိုလားသောရဲဘော်များကလူ့ဂုဏ်သိက္ခာ၊အဖွဲ့အစည်း ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် အမှန်တရားကိုဖေါ်ထုတ်တောင်းဆိုလာကြတာပဲဖြစ်တယ်၊မိမိတို့အားလုံး ရိုးသားစွာပေးဆပ်မှုတွေကိုတာဝန်ရှိသူတစ်ချို့ကတာဝန်မဲ့စွာအာဏာကိုအလွှဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ကြမှန်းသိလာခဲ့ကြတယ်၊
သည့်အပြင် တော်လှန်သောအစုအဖွဲ့အားလုံးကိုထိခိုက်စေနိုင်တာမို့ ဒီအချိန်မှာမပြောကြသေး
တကယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့အားလုံးဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရွံမုန်းသူတွေဖြစ်ပြီး တော်လှန်
ဖြစ်ခဲ့ရသူတွေကြီးမို့ မိမိသိခဲ့တာအမှန်ကြီးပဲလို့ဇွတ်ပေငြင်းဆန်မဲ့အစား အပြန်အလှန်လေး
စားမှုနဲ့အတူ မိမိသိသောအချက်အလက်များကိုရိုးသားစွာဝေငှပေးခြင်းကသာလျှင် အကောင်း
လုံး၏ညီညွတ်ရေးကိုလည်းမထိခိုက်သည့်အပြင် ပိုမိုကျစ်လစ်စွာတည်ဆောက်ပြီးသားဖြစ်ပါ လိမ့်မယ်၊ ကျနော်တို့အားလုံး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခင်မင်မှုတွေကိုဘေးချိတ်ပြီးဆွေးနွေးကြရအောင်၊
ABSDF ကိုရိုးရိုးသားသားချစ်ခဲ့ကြသောရဲဘော်များနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုများအကြား၊ အထင်မှားအမြင်မှားဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတယ်၊ သူတို့ရဲ့တာဝန်ရှိမှုကိုသတ္တိရှိရှိမဖြေရှင်းပဲ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအချင်းချင်းနောက်ထပ်ညီညွတ်မှုကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်၊ ဒီလိုတာဝန်ယူ မှုမရှိတဲ့အတွက် မလိုလားအပ်တဲ့အနှောက်အယှက်တွေ၊ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုအားလုံးခံစား ခံစားခဲ့ရပါတယ်၊
ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအားလုံးဟာ တာဝန်ရှိသူတွေ့ရဲ့တာဝန်မဲ့မှုတွေကြောင့်ပဲဆိုတာကို မမြင်ပဲ အချင်းချင်းပြန်လည်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်၊ ဒီတော့ ရန်သူအားရအောင်လုပ်နေ
ယောင်လေသံပြစ်ခဲ့ကြတယ်၊ ဒါဟာလုံးဝမရိုးသားမှု၊ လိမ်လည်မှု၊ဖုံးကွယ်မှု၊ကိုယ်ကျိုးစီးပွါး
ကာကွယ်မှု၊ လူထုအပေါ်သစ္စာဖေါက်မှုတွေအားလုံးကို တပြိုင်နက်တည်းကျူးလွန်ပြသနေတာ
တော့…. ပြည်သူတွေကိုထောင်နဲ့သောင်းနဲ့ချီ သတ်ဖြတ်ညင်းပန်းခဲ့တဲ့ စစ်အုပ်စုကိုတော့ ခုထိတရားစွဲဆိုဖို့ မကြိုးစားပဲနဲ့ မြောက်ပိုင်းမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုတရားစွဲဆိုဖို့လုပ်နေ တာတော့တော်တော်အံ့သြတယ်။…ရော်နယ်လ်အောင်နိုင်ကပြောတာကတော့…
သာတိုင်းတာရပါလိမ့်မယ်၊ ဒီနေရာမှာနိုင်ငံရေးပါးဝနေကြသူတွေဟာသူတို့၏မှားယွင်းခဲ့သော လူ့အခွင့်အရေးဖေါက်ဖျက်ကျူးလွန်မှုတွေကိုနိုင်ငံရေးကွက်ဖြင့်လှည့်စားပြီးဆက်လက်လိမ်ညာဘို့ကြိုးစားနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။
ပါမှုအဖြင့်ဖေါ်ပြလိုကြပြီး ကျနော်တို့အစဉ်အဆက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တဲ့ လူ့အခွင့်
အရေးချိုးဖေါက်မှုတွေ မိမိတို့အတွင်းမှာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ ပိတ်ပင်တားဆီးလိုတဲ့
တကယ်ဆိုရင် ငါတို့မှာတာဝန်ရှိနေပါလား၊ ငါတို့အဖွဲ့အစည်း၏ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ဖြေရှင်းပေး
ရမည့်တာဝန်ရှိနေပါလားဆိုတဲ့ အသိစိတ်၊ တာဝန်ယူလိုစိတ်ကိုပြသရမည့်အစား ဖြေရှင်းပေး ရန်တောင်းဆိုနေကြသူတွေကို မလိုမုန်းထားရှိနေတာကလည်း မူမမှန်ဆိုတာထင်ရှားလှပါ
ဖုံးကွယ်ထားလို့မရတဲ့ပွင့်လင်းတဲ့(Globalization)ခေတ်ကြီးကိုရောက်နေပါပြီဗျာ၊တကယ်လို့သူတို့ABSDFကိုချစ်ရင်၊ ပေးဆပ်ခဲ့ပြီးသောသူတို့၏သမိုင်းကိုတန်ဖိုးထားလျှင် တာဝန်ရှိ သူတွေ ကို တာဝန်ယူဘို့ပူးပေါင်းပြီးပြောစေချင်တယ်ဗျာ၊ စစ်မှန်တဲ့တော်လှန်းရေးဆိုတာ ဂလဲ့စားချေ ရေးမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့လှစ်လျှူရှုခြင်းလဲမဟုတ်ဘူး၊ လူသတ်ဝါဒမဟုတ်ဘူး၊ အမှန်တရားကို ထာဝရဆုပ်ကိုင်ခြင်းမည်၏၊
သလို အမိန့်ပေးပိုင်ခွင့်လည်းမရှိခဲ့ပါ၊ဗဟိုကော်မီတီမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်ချက် ချထားရင်တောင် ညီလာခံအထိအယူခံပိုင်ခွင့်ရှိနေပါတယ်၊ ဗဟိုကော်မီတီနဲ့ညီလာခံအကြား
မြောက်ပိုင်း(၁၅)ဦး အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုကိစ္စကိုဖြစ်ပြီးတော့မှ တောင်ပိုင်းဗဟိုက၊ လူသတ်မှုကိုထပ်ဆင့်ထောက်ခံမှုပေးခြင်းဟာ သမိုင်းတွင်ခဲ့သည့်မဟာအမှားပဲဆိုတာအားလုံး နားလည်လိုက်ပေမဲ့ အလွန်တရာနောက်ကျခဲ့ပါတယ်၊ ဘာကြောင့်မြောက်ပိုင်းအမှားကိုဗဟို ကထပ်ဆင့်ထောက်ခံခဲ့တာလဲ? ဒါဆိုဘယ်သူတွေကမှားခဲ့ကြသလဲ ?
ဘယ်နေရာမှာမှားခဲ့ကြသလဲ ?၊ တစ်ခုချင်းပြောကြရအောင်။
နိုင်ငံရေးပရောဂါကြောင့်လို့ပြောရင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးကြောင့် ဒီအဖြစ်ဆိုးတွေကြုံရ
တာပါလို့ပြောရင်၊ သိပ်ကိုအလှမ်းဝေးသွားမှာဖြစ်ပြီး၊လူသတ်မှုဆိုတဲ့ရာဇ၀တ်မှုဟာ ပျောက် သွားလိမ့်မယ်၊ တချိန်တည်းမှာပဲကျနော်တို့ဟာ လူသတ်မှုဆိုတဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှု ကိုအမှန်အတိုင်းဖေါ်ထုတ်ရမှာဖြစ်သလို နိုင်ငံရေးအရတာဝန်ရှိမှုတွေကိုလည်း တစ်စစီ ဖေါ်ထုတ်ရမဲ့တာဝန်လည်းရှိနေပါတယ်။
မယ်မထင်ပါဘူး၊ သူတို့အားလုံးဟာ အစုလိုက်အပြုံလိုက်လူသတ်မှုအတွက် လုံးဝတာဝန်ရှိ
သူတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက် သူတို့ကတော့တရားဥပဒေကို မုချရင်ဆိုင်ရမှာပါ၊ တောင်ပိုင်းဗဟို
ကော်မီတီကရော ဘယ်လိုဘယ်အတိုင်းအတာထိပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သလည်းဆိုတာကို အား
ခဲ့ရသည်သာမက တော်လှန်ရေး၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါထပ်ဆင့်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရပြန်ပါတယ်၊ ဒီအတွက်ဘယ်သူ့မှာတာဝန်အရှိဆုံးဆိုတာ ဖေါ်ထုတ်ပြီးတာဝန်ယူခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်၊
အထက်ပါစာသားကတော့ ဗဟိုကော်မီတီဥက္ကဌတစ်ဦးရဲ့ ဗဟိုကော်မီတီကိုယ်စားတာဝန်
ရော်နယ်လ်အောင်နိုင်ရဲ့သွေးရှုးသွေးတန်းနဲ့ပြောနေတဲ့၊စပိုင်ဆိုရင်သတ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာ ABSDF ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုဗြောင်စော်ကားနေတဲ့ စကားလုံးတွေပဲဖြစ်တယ်၊ ဒီလိုလူ တွေရဲ့လက် လွတ် စ ပယ် ပြောကြားချက်တွေကြောင့်ABSDF ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်ရ သလို၊ တိုက်ပွဲအသီးသီး မှာကျဆုံးခဲ့ရသောရဲဘော်ရဲဘက်တွေရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုလည်း စော်ကား လိုက်တာဖြစ်တယ်။
ဒါတွေဟာ စစ်ပွဲတခုအတွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေဆိုခဲ့ပေမဲ့ စွပ်စွဲခံရသူတွေဟာ ခုခံ ကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရန်သူ့သူလျှိုတွေရဲ့အမှုကိုတရားရုံးမှာ ကြားနာခဲ့ပါတယ်။
သွေးအေးအေးနဲ့ရက်ရက်စက်စက်သတ်နေကြတာကိုခင်ဗျားသိနေရက်သားနဲ့၊ဒါတွေဟာ စစ်ပွဲတခုအတွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေဆိုခဲ့ပေမဲ့လို့ပြောရက်ဆိုရက်တဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုး နဲ့ရှေ့နေဖြစ်လာကိုသိပ်ကိုအံ့သြစရာကောင်းပါတယ်။
နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောရရင်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကိစ္စအတွက် ကိုယ့်နဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ပတ်သက်ရာ
အဖွဲ့အစည်းရဲ့အလံတော်အောက်မှာ တော်လှန်ရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်အသက်ပေးခဲ့တဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအတွက်ရော လူတွင်မကသမိုင်းကိုပါအသတ်ခံခဲ့ရသောကံဆိုးသူကျနော်
ကျနော်ဖြစ်စေချင်တာက ဇတ်သိမ်းခန်းကိုကောင်းစေချင်တယ်၊ ကျနော်တို့ကြည့်နေကြမြန်မာ
ဒီလိုမျိုးကံယကံရှင်တွေလုပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းနေကြ၊ဖြစ်စေချင်နေကြတဲ့အထဲမှာ ခံခဲ့ရတဲ့သူ တွေတောင်ပါနေတာကိုက အင်မတန်ကိုထူးခြားနေပါတယ်၊နောက်တစ်ချက်က ကိုယ်ချင်းစာ
စိတ်နဲ့ ခံခဲ့ရသူတွေနောက်ကရပ်နေတဲ့သူတွေကလည်း နောက်ဆုံးအချိန်ထိအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေ
ကိုမလွတ်တန်းစောင့်ကြည့်နေတာကိုလည်းမေ့ထားလို့မရပါဘူး၊ အမြင်မှန်မရပဲဆက်ပြီးမှားတဲ့ လမ်းကိုဆက်လျှောက်နေရင်တော့ အဆုံးသတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး၊
ဒီနေ့မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာလည်း မှားတာကိုမှားခဲ့ပါတယ်လို့လုထုကိုဝန်မခံရဲတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တွေကြောင့် တိုင်းပြည်ဟာလုံးဝငြိမ်းချမ်းရေးမရသေးဘူး၊ ကျနော်တို့အားလုံး ဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ် ကြီးတွေရဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကို အတုခိုးဦးမှာလား။ ဒါမှမဟုတ် အမြင်မှန်ရပြီး မိမိတာဝန်ကိုမိမိတို့
စစ်မှန်တဲ့တော်လှန်းရေးဆိုတာ ဂလဲ့စားချေရေးမဟုတ်ဘူး၊ လူသတ်ဝါဒမဟုတ်ဘူး၊
အမှန်တရားကို ထာဝရဆုတ်ကိုင်ခြင်းမည်၏၊ အမှန်တရားကိုတော်လှန်ရေးသမားတိုင်း
New Generation မှကူးယူဖော်ပြသည်။